मेयर द्वारिकलाल चौधरीलाई पत्र » Purbihotline
मेयर द्वारिकलाल चौधरीलाई पत्र
June 15, 2019 पूर्वी हटलाइन	0 Comments
मेयरसाप तँपाइले घुस खाने , भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने जमर्को गर्नु भयो त्यसकामका लागि इहटरी वासी साथ सहयोग पाउनु भएको तँपाईलाई यस कामका लागि पत्रकार , नागरिक समाज सबैले साथ दिने छन् । तँपाई घुस भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु हुन्छ र आफु पनि स्वच्छ छवीको हुनु हुन्छ त्यसमा विबाद रहेन । तँपार्इँले इटहरी उपमहानगरपालिकालाई भ्रष्टाचार मुक्त क्षेत्र बनाउने तपाईको उद्देश्य विलकुल सही छ । तँपाईले सिर्फ कानुनी प्रकृयामा जानु प¥यो । तँपाईले काँक्राचोरलाई मुड्के सास्ती भन्नु भएको छ यो सरासर गलत छ । भ्रष्टाचारीलाई फुलको मालाले स्वागत गर्ने भन्नु भएको छ यो सही छ वास्तवमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही हुनै पर्छ मुलुक यति सम्म ध्वस्त भएको भ्रष्टाचारका कारण हो । गरिव जनता गरिवीको रेखाबाट उठ्न सकेका छैनन् तर भ्रष्टचरित्रका व्यक्तिहरु रातारात मालामाल बनी रहका छन् । तँपाई विशुद्ध व्यक्तित्व हुनु हुन्छ , तँपाईले चालेको कदम सही छ तर प्रकृया पु¥याउन छुटेको अवस्था छ । मेयर सापलाई म इटहरी वासी साथै पत्रकार भएको हैसीयतले फेरी अनुरोध गर्दछु की इटहरी उपमहानगरापालिकामा प्रेस संयोजक हुनु हुन्छ । कानुनी सल्लाहकार हुनु हुन्छ । तँपाईले डा.बद्रीविशाल पोखरेल, जस्ता इटहरीका प्रतिष्ठत र विद्वत व्यक्तिलाई सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्नु भएको छ ।
तँपाईले पहिले आफु कुन ठाउँमा छु भन्ने हेक्का राखिदिनुस तँपाइ इटहरीको मेयर इटहरीवासीको अभिभावक हो । इटहरीवासीले तँपाई समक्ष हरेक दुःख विसाउछन् , हरेक समस्या लिएर आउँछन् त्यसमा तँपाईले इटहरी वासीलाई चित्त बुझाएर पठाउनु पर्छ । कसलाई के भनेर हुन्छ कुन जनताको के समस्या छ , कस्तो काम हुनु पर्ने भयो भएन भएन भने किन भएन आदी कुरा तँपाईले जानकारी राख्नु पर्ने हुन्छ र जानकारी लिनु पनि भएको छ । तँपाई जनताको घर दैलोमा पुग्नु भएको छ । इटहरीका २० वटै वडाका जनतालाई तँपाईले टाढा नजिक नगरी समान व्यवहार गर्नु भएको छ । बजेटको वितरण सके सम्म राम्रो संग गर्नु भएको छ । तँपाईले इटहरीको बजेटको सही सदुपयोग गर्नु हुन्छ भन्नेमा इटहरीवासीले विस्वास गरेका छन् ।
तँपाई पछिल्लो समयमा आएर कर्मचारीलाई ठीकपार्ने नाममा कुटपिट गर्ने , अपमानजनक व्यवहार गर्ने गर्नु भएको भन्ने सुन्नमा आएको छ ।एक जना पत्रकारलाई लोपरेको , एक पत्रकारलाई नाकको डाँडी भाचिदिने धम्की दिएको भन्ने कुरा न्यूज २४को ”सिदाकुरा जनता संग”कार्यक्रममा बोलेको कार्यक्रम सामाजिक संजालमा भाइरलनै भएको छ । काम गर्ने शिलशिलामा सबैको लग्ती हुन्छ , काम गर्ने सुरमा कतिपय बाधा विध्न आउँछन् त्यसको सामना गर्नु पर्छ । भलै तँपाईले भ्रष्ट कर्मचारी लाई प्रकृया पु¥याएर अवकासदिनु पर्ने थियो कुटपिट गर्नु भयो । तँपाई एक छिन सोचि दिनुस त । तँपाईले जस्तो काँक्रा चोरालाई मुडके सास्ती गर्ने भए , हामीले किन लोकतन्त्रका लागि यत्रो लडाई गर्नु परेको । सभ्य समाज अनि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेर किन निर्वाचन लड्नु परेको । सिदै बलीयाहरुले, शक्ति सम्पन्नहरुले निर्धाहरु र अपहेलित तल्लो वर्ग सहारा नभएकालाई जे गर्दा पनि भै हाल्यो नी । इटहरीको मेयरले विधि नमान्ने कानुन नमान्ने हो भने सर्व प्रथम इटहरी उपमहानपाका सुरक्षाकर्मीलाई अबकास दिनु प¥यो त्यस पछ इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीलाई पनि इटहरी भित्र राख्न दिनु भएन । काँहा पठाउने हो पठाइदिनु प¥यो । इटहरी उपमहानगरपालिका रहेको न्यायीक समिति पनि हटाई दिनु प¥यो । त्यस पछि मेयर सापको छुट्टै दस्ता खडा गर्नु पर्ने भयो सो दस्ताले यसलाई ठोक उललाई हान् भन्दा हान्ने , ठोकने । त्यति धेरै खर्च गरेर निर्वाचनमा मतदाताले भोट दिनु पर्ने कारण के । इटहरीमा जो बलियो छ ? जो शक्तिशाली छ , जो संग ठूलो दस्ता छ उसले सिदै म मेयर भनेर घोषणा गरे भैहाल्यो नी किन निर्वाचन गर्ने ?
हामी निर्वाचनमा विस्वास राख्छौ जनको मतले विजयी हुने संविधानअनुसार चल्ने हो भने जुनसुकै काम गर्दा पनि विधि सम्मत ढंगले जानु पर्ने हुन्छ । मेयर साप तँपाई विधि सम्मत ढंगले जानुस समय लाग्न सक्छ तर तँपाई भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नेमा सफल हुनु हुन्छ । किनकी इटहरीवासी तँपाईको साथमा छन् । मेयर सापले एक छिन सोची दिनुस जनप्रतिनिधि छान्न जनताले मत संकेत गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था किन आयोहोला । तँपाई जस्तो देश विदेश घुम्नु भएको । हरेक क्षेत्रमा गहिरो ज्ञान भएको । पार्टी राजनीतिमा ३० वर्ष भन्दा बढी सेवा गर्नु भएको व्यक्तित्वले ठूलो छाती , ठूलो हृदय राखेर काम गर्नु प¥यो ।
मेयर साप तँपाईलाई काम गर्नमा समस्या भयो होला, बाधा भयो होला ? दिमागले सोचिदिनुस त मेयर यू पत्रकारले विक्रिति विसंगतिका बारेमा लेख्ने नलेख्ने ? इटहरीको सिंएफएल का बारेमा समाचार लेखेर त त्यसबारेमा हाल छानविन भै रहेको छ । पत्रकारले यीनै यस्तै कुराको खोजविन गरेर कलम चलाउने भएकाले समाजमा केही हद सम्म भए
पत्रकारको सम्मान गर्न पत्रकारलाई स्वतन्त्र पूर्वक लेख्न दिन बाधक बन्नेलाई तँपाईले सम्झाउनु पर्ने बुझाउनु पर्नेमा तँपाइलेनै कुनै पत्रकारालाई लोपरि दिनु भयो कुनैलाई नाकको डाडी भाचि दिन्छु भनेर धावा बोल्नु भयो । र अझै कालोमोसो दलेर घुमाउछु भनि रहनु भएको छ । के तँपाइको विचारमा अब हामी फेरी जसको शक्ति उसकै भक्ति, उही ढुङ्गेयुज । बर्बरताको युगमा जानु पर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ? मुलुकमा अदालत छ , मुलुकमा सुरक्षाकर्मी छन् , मुलुकमा विविध क्षेत्रको विकासका लागि , विविध क्षेत्रको सेवाका लागि कर्मचरीहरु नियुक्ति भएकाछन् । मुलुक एउटा पद्दतीमा चलेको छ । संविधान मा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, बहुदलिय संसदिय व्यवस्था लगायत संविधामा उल्लेख भएका कुरालाई हामीले अंगिकार गरेका छौं । तँपाईले भने न्यूज २४ मा दिएको अन्तरवार्ता हेर्दा कानुनको ठाडै उल्लंघन गर्नु भएको देखिन्छ ।
तँपाइले आज कर्मचारी कुट्नु भयो , पत्रकारलाई अपमान जनक व्यवहार गर्नु भयो तँपाइले गरेका सबै काम मानीलिउ तँपाईको सोचमा ठीक छन् । तर भोली तँपाई भन्दा बलीया , अरु पनी छन् , बलियाले तँपाई उपर आक्रमण गरेमा के गर्नु हुन्छ । यसरी रिसको आवेगमा आएँ भन्दैमा बलियाले शक्ति सम्पन्नले निर्धालाई कुटने हो मार्ने हो भने हाम्रो सभ्याता कता जाने हो । जसले सक्छ उसले सक्नेलाई पिट्ने , मार्ने संस्कारको विकास भयो , प्रहरी प्रसासनलाई जनताले टेरेनन् , कानुनको पालना गरेनन् भने एक छिनलाई सम्झनुस त यो मुलुकमा कुटपिट त सामान्य भयो हत्या, हिँसा, अपहरण, बलत्कार जस्ता घट्ना कति घट्छन् होला ? बलिया र शक्तिमा पुग्नेले निर्धालाई जे गरे पनि सहनु पर्ने बाध्यता हो भने हामीले पंचायति व्यवस्था हटाउन हाम्रा अग्रजहरुले कति लडाई गरे । कति ले जीउजान त्याग गरे कति घाइते भए । एक छिन ठण्डा दिमागले सोचिदिनुस त । तँपाईलेनै कर्मचारीलाई हात छाड्ने तथा पत्रकारलाई अभद्र व्यवाहार गरे पछि अरुले यसबाट के सिक्लान् समाजको कस्तो सन्देश जान्छ ।
मेयरसाप तँपाईले पत्रकार संग सम्यमता अपनाइदिनुस भनेर धेरै पत्रकारहरुबाट आग्रह आएको होला । पत्रकारले गल्ती गरे होलान्, पत्रकारले पत्रकार आचारसंहित विपरित कार्य गरे होलान् त्यसका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेसकाउन्सील नेपाल , अदालत आदी सम्बन्धित निकायमा जान सकिन्छ । त्यति पनि भएन भने कुन पत्रकारबाट के कस्ता गल्ती कार्य भए पत्रकार सम्मेलन गरेर सो कुराको पर्दाफास गर्न सकिन्छ । पत्रकारले गल्ती गर्छनभने पत्रकार उपर पनि कारबाही प्रकृया अगाडी बढाउन सकिन्छ तर पत्रकारलाई दुव्र्यवहार गर्न मिल्दैन । मेयर साप तँपाईले ३० वर्ष देखि राजनीति गर्दै आउनु भएको छ धेरैपत्रकारहरु संग तपाइको चिनजान हिमचिम छ । सबै पत्रकार चाटुकार छैनन्, सबैले पित पत्रकारीता गरेकाछैनन् । निस्वार्थ भावनाले देश र जनताको पक्षमा कलम चलाउने पत्रकार पनि छन् । तँपाइले उपमहानगरपालिकामा प्रेस संयोजक नियुक्तिगर्नु भएको छ वाहाले पनि कुनपत्रकार कस्ता छन् भनेर मोटामोटी चिन्नु भएकै छ । त्यसमा पनि पत्रकारले लेखेका समाचार देश र समजका लागि , आवाज विहिनहरुका लागि , पिछडा वर्गका लागि, सिमान्तकृतकालागि ,विक्रिाति र विसंगतिका विरुद्धमा, कृषिक्षेत्रको विकास , इटहरीको विकास र समग्र नेपाको उन्नती र प्रगतिको पक्षमा छ छैन पत्रकार महासंघलाई अनुरोध गरेर पत्रकारीताका विज्ञको अध्ययन समिति बनाएर रेडियोमा आएका समाचार, टेलीभिजनमा आएका समाचार, अनलाइनमा अएका समाचार, छापामाध्यममा आएका समाचार आदीको अध्ययन गर्ने परीपाटी बसाउँ । इटहरीमा नयाँ कामको थालनी हुन्छ यसको प्रभाव कस्तो पर्छ नयाँ अनुभव गरौं । कुन पत्रकारले वास्तविक पत्रकारीताको मर्म र धर्म अनुसार आचार सहितालाई सिरोधार्य गरेर समाचार लेखेको छ । कसले पित पत्रकारिता चाटुकार पत्रकारीता गरेको छ सहज रुपमा छुट्याउन सकिन्छ । त्यो सन्देश आम पाटक , श्रोता, दर्शकले थाहा पाउने छन् र जसले पत्रकारीताको आचार संहिता विपरित समाचार लेखेको छ ? निजी स्वार्थमा कसैको बहकाउमा लागेर समाचार लेखेको त्यस्ता पत्रकार आम जनता सामु नागिने छन् त्यस पछि उनीहरु संग २ विकल्प रहने छ कि त आफुलाई सुधारेर सहीबाटोमा लैजाने वा पत्रकारीता छाडेर अन्य पेसा अपनाउने ।
मेयर साप तँपाई इटहरीको मेयर तँपाईले नै कानून हातमा लिनु भयो भने देश विदेशमा इटहरीका बारेमा कस्तो सन्देश जान्छ होला ? एक छिन् लाई जनताको सेवक सम्झेर ठण्डा दिमागले सोचि दिनुस त ? मेयर साप हरेक कुराको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष हुन्छ । मेयर सापले थालनी गरेको भ्रष्ट कर्मचारी हटाउने अभियान सकारात्मक छ भने । कानुनी प्रकृया पु¥याई कारबाही गर्नु पर्नेमा विधिको शाससन विपरित कुटपिट गर्नु नकारात्मक कार्य भएको छ । यसबाट मेयरसापको उचाई क्षणीक बढ्ला तर दिर्घकाल रुपमा यसको असर नराम्रो हुने छ । मेयर साप संविधानको प्रस्तावनामनै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्नेलेखिएको छ , नेपालको संविधान अनुसार निर्वाचित मेयर सापका अभिव्यक्ति नेपालको संविधान र कानुन विपपिरत हुनु भएन तँपाईको कार्यशैली विधिको शासन विपरित हुनु भएन । मेयर सापले आगामी दिनमा स्वतन्त्रपूर्वक पत्रकारीता गर्ने वातावराण मिलाएर इटहरीका संचारमाध्यमहरु, पत्रकारहरुको समस्या बुझि दिएर इटहरीबाट राम्रो कामको थालनी गरि दिनुस की अन्य जिल्लाकाक पत्रकारहरुले पनि इटहरीको उदाहरण दिएरु गुणगान गाउन सकुन् । वस्तवमा हमी सबैले मयेर सापले चालेको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनलाई साथ दिने र इटहरीलाई वास्तवमै भ्रष्टाचारमुक्त उपमहानगरापलिका बनाउनएर एउटा नयाँ उचाई कायम गर्नु पर्छ यसमा हामी पत्रकार, जनप्रतिनिधि , स्वच्छ छवीका कर्मृचारी , नागरिक समाज, सर्वसाधारण सबैले गौरव गर्ने ठाउँ हुनु पर्छ ।
मेयर साप मानिस धनी, हुनु साधनश्रोत सम्पन्न हुनु, बाटाघाटा बनिनु, विजुली टेलीफोन उपलब्ध हुनु मात्र विकास होइन जनता हरेक हिसावले सूसूचित हुनु पर्छ । संचारमाध्यमबाट नै आम जनताले सूचना पाउने भएकाले पत्रकारीता क्षेत्र को विकास हुनु उत्तीकै आवस्य पर्छ । मेयरसापले पत्रपत्रिका, रेडियो, अनलाईन, टीभी आदीमा इटहरीका बारेम के कस्ता समाचार आएकाछन् प्रेस संयोजक वा अन्य कुनै कर्मचारीलाई खोज्न पढ्न लाएर हरेक दिनमा एक घण्टा त्यसबारेमा ती आएका समाचारको समिक्षा गर्ने र उपमहानगरपालिकाको कहाँ के कस्तो कमजोरी भएको छ , कुन फाँटका कर्मचारीले कमि कमजोरी गरे कुन जनतो के कस्तो सेवा पाउनु पर्ने पाएनन् वा कुनै जनप्रतिनिधिबाट पनि कमी कमजोरी भएको छ की आदी विषयमा छलफल चलाउने र भएका कमि कमजोरीमा सुधार ल्याउन सकेमा इटहरीबारीको घैटामा घाम लाग्ने थियो इटहरीवासीले गाउँ गाउँमा सिंहदरवार, घर घरमा सरकार भएको अनुभुति गर्न पाउने थिए ।
मेयरसाप संचार क्षेत्रमा काम गर्ने पत्रकार यही समाजका उपज हुन् ,चन्द्रमाबाट वा अन्य कुनै ग्रहबाट आएका होइनन् । पत्रकारको गल्ती हुन सक्छ नियोजित गल्ती हो वा अन्जानमा त्यसलाई छुट्याउनु पर्छ । नियोजित गल्ती गर्ने जो सुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ र अन्जानमा , अज्ञानतावस भएको गल्तीमा सुध्रिने मौका दिइनु पर्छ । पत्रकारलाई विभिन्न तालिम दिने, भ्रमण गराउने , इटहरीको समग्र उन्नती र प्रगतिका बारेमा कस कसको के कस्तो सोच छ त्यस बारेमा अभिव्यक्त गर्न लाउने गरेर पत्रकारहरुलाई नाकारात्मक मात्र होइन सकारात्मक कार्यमा पनि लेख्न लाउनु पर्छ र व्यस्त बनाउनु पर्छ ।
सामाजिक संजालमा मेयर सापले भ्रष्टारीलाई हटाउने अभियानको थालनी गर्नु भएकोमा इटहरी वासीको तर्फबाट सर्पोट आएको छ यसले के देखाउँछ भने जनताले कर्मचारीबाट धेरै दुख पाएकाछन् भन्ने संकेत गरेकोक छ । त्यसका लागि हरेक वडामा जनताका कुन काम भएन किन भएन कुन कर्मचारीले दुख दिए त्यसको उजुरी सुन्ने र वास्तविकता केहो छानविन गरेर घुस खाने , भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारी उपर जनताको उजुरी साथमा राखेर कारबाही प्रँकृया अगाडी बढाउनुस इटहरी वासी , नगारिक समाज, पत्रकारको तँपाईलाई पूर्ण रुपमा सहयोग गर्नु हुने छ ।
मेयर साप तँपाईले त्यसै मेयरमा जित्नु भएको छैन तँपाईलाई इटहरीको कुन वडामा कुन टोलमा के कमी छ ? खानेपानीको व्यवस्था, बजार व्यवस्थापन, इटहरी बजार डुवानको समस्या बजारको अस्त व्यस्तता, खोला मिचेर घर टहरा बनाएका विषय वस्तु देखि सार्वजनिक जग्गाको खोजी गर्ने कार्य सबै विषय वस्तुमा तँपाईलाई जानकारी छ । तँपाइले कम्यनिष्ट पार्टीको टिकट पाएर निर्वाचन जित्नु भयो तर अब तँपाई कम्यूनिष्टको कुनै पदमा रहे पनि तँपाई आम इटहरी वासीको अभिभावक हो , मेयर हो । तँपाईले इटहरी वासीको दुख , समस्या आदी हेरेर काम गर्नु पर्छ र गर्नु भएको पनि देखिन्छ । मेयर साप तँपाईले योजना बनाउने हो , विषयगत विज्ञहरु संग सल्लाह लिने हो । काम गर्ने कर्मचारीले हो र काम भएन भने किन भएन अनुगमन गरेर सम्बन्धित कर्मचारीलाई स्पटीकरण सोध्ने सुरुमा सुध्रने अवसर दिने तीन पटक सम्म स्पष्टीकरण सोध्दा पनि नसुध्रिएमा अनि कारबाही प्रकृया पु¥याएर कर्मचारीलाई हटाउने हो । कर्मचारीले घुस खाएको, भ्रष्टाचार गरेको मेयर पत्ता लाउन कुनै सुत्र परिचालन गर्नु पर्छ ।घुस , भ्रष्टाचार अनियमितताका बारेमा कलम चालाउने ,पत्रकार र संचारमाध्यमलाई पुरस्कृत गर्ने भनी पुरस्कार रकम छुट्याईएमा भ्रष्टाचारका बारेमा खोज पत्रकारीता गर्न लाई प्रोत्साहित गरिएमा धेरै हद सम्म घुस , भ्रष्टाचार, अनियमितता हटाउन सकिन्छ । मेयर साप बिराटनगरका प्रेम संजेललाई पनि विभिन्न आरोप लागेका थिए तर वाहाले प्रकृया अनुसार जानु भयो वाहालाई परेको अन्याय उपर अदालत जानु भयो नभन्दै वाहाले न्यायपाउनु भयो । पुर्व प्रधानन्यायाधीशलाई अनावस्यक महाभियोग लगाइयो तर सर्वोच्च अदालतले वाहालाई न्यायदियो । कुलमान घिसिंङलाई पनि राम्रो काम गर्न धेरै विध्न बाधा आइपरका थिए र हाल पनि वाहालाई दोषि देखाउन धेरै प्रयत्न भएकाछन् तर वाहा बुद्धि पु¥याएर गृहकार्य गरेर , नियम संगत ढंगले काम गर्नु भएकाले यति सम्म सफल हुनु भयो आम नेपालीले कुलमान घिसिङलाई सम्मान गर्छन की वाहाले विद्युत लोडसेडिङमा हुने गरेका अनियमितता धेरै हदसम्म हटाउनु भयो । मेयर सापले पनि जोसका साथमा होस पु¥याएर ,कुन काम कसरी गर्ने कसरी सफलता हासिल गर्न सकिन्छ अग्रीम गृहकार्य गरेर अगाडी बढ्नु पर्ने देखिन्छ । मेयर साप तँपाईलाई तँपाई आबद्ध पार्टी भित्रकै केही साथीले असहयोग गरेको काम गर्न नदिएको भन्ने सुन्नमा आएको छ यस तफ तँपाइ निश्चिन्त भएर इटहरीवासीको सहयोग लिनुस, पत्रकारहरुको सहयोग लिनुस, सल्लाहकारहरुबाट उचित सल्लाह लिनुस तपाईको अभियानलाई कसैले रोक्न, छेक्न सक्ने छैन । यस पत्रमा लेखिएका कुरा राम्रो लागेमा सmुझावका रुपमा ग्रहण गरि दिनुस र गलत लागेमा यी सबै हरफ र शब्दहरुलाई विर्सि दिनु होला । अन्त्यमा मेयर साप संग फेरी पनि अनुरोध छ पत्रकारहरुको लेखनिय स्वतन्त्रतामा कही कतैबाट हनन् हुन नदिनु होला ।
← इटहरीमा मिस व्युटी आइकन हुने
मेयर कपको दोश्रो दिनको खेलमा ए पि एफ बिजयी →
पञ्चतन्त्रका कथा र वर्तमान नेपालका सुकेधाराहरु